धनकुटा । पञ्चायतका हस्ती थिए स्व. सूर्यबहादुर थापा । उनकै कारण धेरैले धनकुटालाई सूर्यबहादुर थापाको जिल्ला भन्ने गर्छन् ।
स्व.थापाले २०४८ सालमा राप्रपा (थापा) को स्थापना गरे । जीवनको अनितम क्षण अर्थात् २०७२ साल बैशाख १२ गतेसम्म पनि राप्रपामै रहेर आफ्नो राजनीतिक यात्रा गरे ।
उनका छोरा सुनीलबहादुर थापाले २०६९ सालदेखि त्यही राप्रपाको राजनीति गरे । राप्रपाकै नामबाट धनकुटामा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनका धनकुटा क्षेत्र नं. २ बाट विजयी बने र दुईपटक मन्त्री पनि बने । तर, एक वर्षअघि आफ्ना बुबाको सपना साकार पार्न भन्दै नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरे ।
नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेपछि स्व. थापा पुत्र सुनीलले भने आफ्ना बुवाको भन्दा विपी कोइरालाको गुनगान थाउन थालेका छन् । उनले धनकुटामा हुने अधिकांस कार्यक्रममहरुमा आफ्ना पिता नेपाली कांग्रेस धनकुटाको संस्थापन सभापति रहेको र सोही साइनोलाई जोड्न नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेको बताउने गरेका छन् ।
तर, हालसम्म सूर्यबहादुर थापा कहिले नेपाली कांग्रेस धनकुटाको संस्थापक सभापति भए भन्ने तथ्यांक कतै भेटिँदैन । तैपनि सुनीलबहादुर थापाले संस्थापक सभापति भएको दावी गर्दै आएका छन् । उनी नेपाली कांग्रेस प्रवेश गर्नुअघिसम्म सूर्यबहादुर थापा नेपाली कांग्रेसमा रहेको कुरै गर्दैन थिए ।
उनै सुनीलले अघिल्लो वर्ष विराटनगरमा भएको प्रदेश भेलामा आफ्ना वुवाको तस्विर नराखेको भन्दै विरोध जनाएका थिए । तर, अहिले उनी सहभागी कार्यक्रममा स्व. विपी कोइरालाको तस्विर राखिने गरेको छ । जुन स्वभाविक पनि हो ।
उनी केही समयदेखि नेपाली कांग्रेसको महाविधेसनका कारण धनकुटामा सक्रियपूर्वक विभिन्न कार्यक्रमहरुमा सहभागी भइरहेका छन् । वडा अधिवेसनको बेला धनकुटाको मुगामा पनि सहभागी भएका थिए । त्यो बेला पनि विपी कोइरालाको तस्विर राखिएको थियो । जुन उनको आफ्नो गाउँ पनि हो ।
आज पनि धनकुटाको पालिकाहरुमा भइरहेको पालिका अधिवेसनमा प्रमुख अतिथि बनेर पाख्रिबास पुगेका थिए । जुन अधिवेसन उद्घाटन कार्यक्रममा विपीको तस्विर राखिएको छ । सो पञ्चमा नेपाली कांग्रेस धनकुटा ख को क्षेत्रीय सभापति इन्दिरा थापा, पाख्रिबास नगर समिति अध्यक्ष ज्ञानबहादुर गुरुङ लगायतका नेताहरु बसेका छन् ।